Wabiga Shabeele oo laga cabsi qabo inuu fatahaad sameeyo & beeraleyda oo ka hadashay. - Saafi Films Production Somali Films Hindi Af Soomaali Musalsal heeso
Wabiga Shabeele oo laga cabsi qabo inuu fatahaad sameeyo & beeraleyda oo ka hadashay.
Udugii Jaceylka 60
WARKA 22 09 2017 Maalinta nabada aduunka oo Muqdisho laga xusay.
WARKA 18 01 2019 Ciidamada booliiska oo ka hadlay askari lacag baad ah ka qaadaya…
WARKA 03 11 2019 Dowlada Soomaaliya oo gebi ahaan kala wareegtay Ahlu Suna deeganadii ay…
Somalia Records First Case Of Coronavirus
Somali PM Off To France For Paris Peace Forum
Daawo Sawirro Gud. Jawaari oo la sheegayo in uu ilaalo hubeysan la galay baarlamaanka